Kooxda Jwxo-shiil, oo Iskudayeysa in ay ku Badbaado Gacmaha Shakhsiyaad u Dhashay Jamhuuriyada Jabtay ee Somaliya. – Rasaasa News
Kooxda Jwxo-shiil, oo Iskudayeysa in ay ku Badbaado Gacmaha Shakhsiyaad u Dhashay Jamhuuriyada Jabtay ee Somaliya.
Jul 11, 2011 Kooxda Jwxo-shiil, oo Iskudayeysa in ay ku Badbaado Gacmaha Jamhuuriyada Jabtay ee Somaliya.
Muxuu ahaa mabda ururka ONLF,maxayse beelaha Somaliyeed hore ugu diideen in ay kala qayb galaan halgankii qoriga ahaa ee uu waday ururku, intii uusan burburin, maxayse maanta u tari karaan Jwxo-shiil, shakhsiyaadka iyo beelaha Somaliyeed ee uu buunka u afuufayo?
Gabalka Ogaden intii ka horaysay curashadii ururka ONLF, sanadkii 1984 waxaa ka hano qaaday labo urur, kuwaas oo kaga horeeyey ONLF colaada qoriga.
Ururka ONLF-na, waxaa uu ka dhashay guul daradii gaadhay labadii urur ee ka horeeyey, kuwaas oo ay abuurtay Jamhuuriyadii Somaliya, kolkii dambana ku burburay gacmaha Jamhuuriyada Somaliya.
Xiligaas oo dhalinyaro u dhalatay gabalka Ogaden ay darseen xujada guul darada ee haysata halgan gabalka Ogaden in ay tahay Somaliya.
waxaa la is tusay in labo dagaal oo ka dhacay gabalka Ogaden ay labadaba Somaliya waday, Ethiopia labada dagaalba waxay dacwad u gaysay golaha amaanka.
Golaha Amaankuna labada dagaalba waxay eedda ku xukuntay Somaliya; in ay bixiso wax alaale wixii kharaj ah ee uu keenay dagaalku, in kasta oo ay Somaliya diiday.
Iyaga oo arimahaas ka duulaya waxay dhalinyaro u dhalatay gabalka oo dhamaantood ah hal beel, sameeyeen urur wadani ah oo siyaasadiisa dibada iyo gudahaba ayna cid kale shaqo ku lahayn, waxayna ururka u bixiyeen JABHADA WADANIGA XORAYNTA OGADEENIYA [JWXO].
Runtii magaca caanka ah ee caalamku gabalka u yaqaan waa OGADEN, oo ah magaca beesha ugu badan gabalka sida ka jirta dalal badan oo aduunka ah.
Magacan ONLF, markii la sameeyey waxaa ka cadhooday 100% belaha Somalida ah, oo runtii ay dhibaato badan ku soo gaadhay xiliyadii ay ka dhaceen gabalka labadii dagaal ee hore.
Ujeedada ugu weynayd ee Jwxo, loo sameeyey waxay ahayd in labada dal ee Somaliya iyo Ethiopia uusan midkoodna wadin danaha dadka gabalka dagan.
Magaca dartii, ayey dhamaan ummada Somalidu kaga hadhay halgankii ay waday Jwxo, waxbase uma ayna waayin Jwxo, waayo waxa ay aaminsanayd ayaa ahaa in ay ka baxdo labada gacmoodba iyada oo isticmaashay halku dhaga ah; MIDNIMO, MINTID, ISKU TASHI, GUUL IYO GOBNIMO.
Runtii dawladii cusbayd ee Ethiopia Jwxo, waxay u aqoonsatay urur wadani ah, waxayna ku marti qaaday ka qayb galka dhismaha dalka, xubnaha ururka intoodii badanayd way ka qayb galeen. Guul doorasho dabadeed waxayn soo dhiseen maamulkii ugu horeeyey ee uu gabalku yeesho abid, in kasta oo ay ka farganaxday. Laakiin waxa jiray xubno mintid ah diidanaa, kuwaas oo lahaa ujeedada ururku xukun way ka fogatahay khalad iyo sax kuu ahaaba.
Wixii ka horeeyey 2000, ururku wuxuu waday dagaalo cilmiyeysan oo aan cidna waxyeelaynin milatari mooyeen. Ethiopiana, waxay u arkaysay urur wadani ah oo waxyeeladiisu ay kooban tahay.
Eritrea, waxay hal mar badashay ujeedadii ururka, waxaana bilowday khilaaf ururka dhexdiisa ah oo ku salaysan ujeedadii iyo mabaadiidii.
Dirba ururku wuxuu bilaabay in uusan cidna u aabo yeelin, dhicida shacabka, gubida gaadiidka shacabka iyo kuwa samo falka iyo kufsiga xaawaleyda.
Waxaa bilaabmay burbur ay sameeyeen gacmo shisheeye, Jwxo waxay raacday tubtii kuwii ka horeeyey, in kasta oo ay ka dhalatay ka leexashada tubta qaloocan hadana si fudud ayey u gashay.
Beeshii kali waday Jwxo, ayaa iyadii ay isku soo jeedsatay, oo xagey u ciirsan horay bay u diideen beelaha kale ee Somaliyeed.
Xalku wuxuu noqday Nabadu waa dawo labao urur oo waday dagaalkana nabad bay qaateen, walow ay jiraan in diiday oo haatan aamini waayey dadkii halganka waday, dabadana la galay beelo Somaliyeed oo ay toodiiba saabatay.
Jwxo-shiil, oo ah Janan u suntan Somaliya, ahna ninka dhigay waxa dhacay, waxay ka maaran siinwayday in uu salka ka galo Somaliweyn.
Waxaana uu fagaarayaasha ka yidhaahdaa “Ethiopia, oo aan gudaheeda laga dagaalamin dawlad Somaliyeed dhalan mayso.” Ma dawlad Somaliyeed dhalashadeedaa loo baaba,ay iyada oo dhisan baa la diidaye, mindha maba ogga Jwxo-shiil.
Ogaden, 20 sano ayuu dagaal waday oos dab galay, Daafuur iyo dadkii kaleba dawlad bay hanteen, waxa dib u dhigayna waa doqonka Jwxo-shiil. Maantana wuxuu yidhi: Somalay dab soo qaado oo kaalay gabalka Ogaden ka dagaalama waa doqonimo kale, iyga oo dawlada ayey wax ka tari waayeen Ethiopia.
Wasaarada Arimaha Dibada ee Autralia oo Su,aalo Waydiisay Laba Xubnood oo ka Tirsan Ururada ay Ethiopia Galisay Liiska Argagixisada.
Xoghayaha Arimaha Dibada ee Ingriiska oo Booqasho ku Jooga Ethiopia